Isilimela 30, 2018 admin
uhlolisiso lubonisa 27% of UK millennials abangamadoda bakhetha Bitcoin phezu izindlu
UK based real estate developer Get Living waqhuba isifundo kwaye wafumanisa 27% le millennials eyindoda uhlanga lingathanda ukutyala imali Bitcoin kunokuba izindlu.
Ngokutsho real estate developer Fumana Living, yinxalenye isizathu lwabantu ethile wabona Bitcoin njenge investment enomtsalane nangakumbi kukuba millennials ukubamba imbono yokuba cryptocurrency flagship anazo ibe ephezulu ukwishiba kuthelekiswa izindlu.
Kwathiwa ukuba millennials bona i "Ukunyuka yokusebenza Bitcoin - ilandelwe ulungiso phantse kakhulu ngokulinganayo - [kwaye] ibamba ngamayelenqe ngaphezu ithemba lokukhula ngcembe amaxabiso ndlu ".
Union Square Ventures yenza utyalo-mali lwexesha elide ze crypto kunye blockchain
New York Union Square Ventures unezinto ezinkulu ukuba inzuzo ishishini ezigidi zeerandi ukuba ndinokuba blockchain kunye crypto ku 10 iminyaka.
Albert Wenger, ukulawula iqabane e Union Square Ventures bathi:
"Sibona eninzi zibheke… Abatyali-mali esisiso ngokugalela eninzi imali kule candelo, ngoba ndicinga abantu Niyabubona blockchain eliphumelelayo apha ukuze kube uxabisa zezigidi, okanye isibini ka ezigidi zeerandi, Yinto neze crazy ukucinga nto. "
Wenger waphinda Apple co-umsunguli Steve Wozniak, athi kule veki ukuba blockchain kungaba kwiqamza, neenkampani ngokuya ngesisu-up ngezinga elifanayo njengoko era dot-com. Uthe ke yena ukuba umngcipheko akwazi ukuhlawula off for abatyali zimali ukuba ekuqaleni, wawaneka babheje zabo.
"Ngokuqinisekileyo, nayiphi na iprojekthi omnye kukho ithuba ophezulu kakhulu ngeke isebenze,"Wenger uthe. "Nje ngeziphumo, ukuba usebenza, imivuzo uya kuba phezulu kakhulu. "
$1B ongena market crypto in elidlulileyo 24 iiyure
Le marketcap for cryptocurrency umzuzile $20 billion ngokwexabiso kule yokugqibela 24 iiyure, uya kusuka $233 billion ngoLwesihlanu ukuba $256 billion namhlanje.
Thomas Lee, intloko uphando Fundstrat Financial kutshanje uthe dollar ngalinye bengena okanye nokuphuma crypto, kukho i $20-$25 igalelo kwixabiso lemarike crypto, ebonisa billion zeedola wangena crypto kwixa elidlulileyo 24 iiyure.
Umzuzwana ngamavoti ukuba lula ukulawulwa ETF
US izibambiso Regulator, i isekhondi, bavotela ngazwi ukuphakamisa ukwehla nemithetho yayo lokuvuma eliphantsi Exchange lomngcipheko mali wayerhweba yintoni wehlile nempumelelo enkulu ukuba $3.5 yezigidigidi market.
ukuba ukusebenza, lo mgaqo kungabangela ukuba iinkampani ezithengisa ETFs yokusungula iinguqulelo plain vanilla ngaphandle kuqala imvume elifuna ukusuka umlawuli. I Ima uthe unethemba utshintsho ulawulo liya komeleza ukhuphiswano kunye ezintsha ngokuthotywa nemiqobo yokungena.
Utshintsho Umthetho kuxhomekeke ekubeni ingxelo evela shishino.
kungoku nje, benkampani ETF kufuneka ufumane umzuzwana imvume, eyaziwa ngokuba isiqabu exemptive, ngaphambi kokuthengisa imali phantsi Investment Company Act of 1940.
Commissioner Kara Stein uthe:
"Lo mthetho uza kuquka ezininzi iimfuno website ukuveza ukuba xa odolo ezikhoyo ezifana ngokuveza ixabiso ETFs yangoku net asset share nganye, ngamaxabiso, premium Izaphulelo – ngasinye njengoko ngosuku ngaphambi.”
zonke Cryptocurrencies 18 Janua...
Post Previous:Blockchain News 29.06.2018